Olee otu esi etinye Honduras na Mmepe Mmepe?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Honduras » Olee otu esi etinye Honduras na Mmepe Mmepe?
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Akụkọ gbasara Honduras • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
Ọ bụ ezie na otu n'ime Central America kachasị n'okpuru ebe radar na-aga, Honduras na-enwe ọganihu na mpaghara njem njem ya. Mba a enweela mmụba na-aga n'ihu na ndị njem njem njem n'ime afọ ole na ole gara aga, nabatara ihe karịrị nde mmadụ abụọ na 2017, nke na-anọchite anya ihe karịrị nde US $ 700 na mmefu ndị njem. Onyinye njem nke mba ahụ bụ onye na-anya ụgbọ ala maka ụlọ ọrụ ndị njem ya, yana ọtụtụ ụgbọ mmiri ọhụrụ na-abata na 2017. Honduras ewepụtakwara uto na njikọta ya ma kwupụta mmepe ụlọ nkwari akụ ọhụrụ. N’okpuru ebe a bụ ihe rụpụtara ugbu a maka ụlọ ọrụ Honduras Institute of Tourism:
Airportgbọ elu International nke Juan Manuel Galvez na Roatan ga-enweta ọtụtụ nkwalite n'oge na-adịghị anya gụnyere mgbatị nke runway na ụlọ ọhụrụ maka ndị njem. Ihe nkwalite ndị a ga-enye ohere ka ọdụ ụgbọ elu na-enwetara ụgbọelu, yana ịka mma ilebara ndị njem anya. Ihe ọzọ dị mkpa mere na Honduras bụ mgbakwunye nke Air Europa na-enye ụgbọ elu na-akwụ ụgwọ kwa izu site na Madrid, Spain, na San Pedro Sula, Honduras. Routezọ ọhụrụ a emeela ka njikọ dị ukwuu maka mba ahụ gaa ebe karịrị 20 ebe Europe na ihe karịrị otu puku ọwa ahịa maka ahịa nke tiketi ụgbọ elu. Flightgbọ elu Air Europa kwa izu malitere na Eprel 2017 mgbe ụgbọ elu karịrị 85 pasent. Kemgbe ahụ, Air Europa gbasaa ikike nke ụgbọ elu na ụzọ ahụ na Airbus 330-300 nwere ike ịnabata ndị njem 388, na-agbakwunye oche 89 ọzọ. Enwere ike ịbawanye ugboro abụọ na izu abụọ kwa izu ugbu a.
Thegbọ njem ahụ bụ ihe ntinye aka na ụlọ ọrụ njem njem nke Honduras, ebe mba ahụ nabatara ihe karịrị otu nde ndị njem ụgbọ njem na 2017 na-anọchite ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 5 karịa 2016. Kacha nso nso a, Roatan anabatala ụgbọ mmiri ọhụụ ọhụrụ gụnyere Celebrity Cruises 'Celebrity Reflection, Viking Ocean's Viking Sky na TUI Cruises 'Mein Schiff si Germany.
New njem nleta Ahụmahụ
Ọ bụ ezie na ama ama Honduras nke ọma maka ọmarịcha saịtị ndị mgbe ochie dịka Copan, na mmiri ya na-enweghị atụ na mpaghara Caribbean, Honduras Tourism Board na-ekwusi ike ugbu a iji gosipụta ọmarịcha ya Nnụnụ ahụmahụ. Honduras bụ otu n'ime mba ndị dị na Central America na-egosipụta ala echedoro nke nwere mpaghara 121 ma nwee ụlọ karịa ụdị nnụnụ 770. N'oge na-adịbeghị anya, mbọ gbadoro anya na nkwalite na mmepe nke ọrụ enyere maka Birdwatching, nke enwere ezigbo ndị nduzi na ndị na-eme njem nlegharị anya na mpaghara a. Usoro okike di iche-iche na Honduras nyere ndi obia ohere ihu otutu umu nnunu tinyere Ocellated Quail, Motel nke a na-akwụ Keel, Lovely Cotinga, Agami Heron na Honduran Emerald Hummingbird.
The Isticzọ njem kọfịị Touristic, nke na-enye ndị ọbịa ohere ịbịa leta kọfị kọfị ma nwee ngagharị zuru ezu nke usoro ahụ site na mkpụrụ gaa na iko, bụ ahụmịhe ọzọ ka na-emewanye. Ruo ọtụtụ afọ, a na-eto Honduras maka kọfị ya na afọ gara aga, kọfị kọfị nke Honduras 'José Abelardo Díaz Enamorado toro dị ka "Onye Kachasị Mma nke Kachasị Mma" na 2017 Ernesto Illy International Coffee Awards. E nwere mpaghara isii ị ga-enweta kọfị kọfị na Honduras: Copan, Opalaca, Montecillos, Comayagua, El Paraíso na Agalta.